Hizara traikefa any toliara ny Tamarin | NewsMada
Hizara traikefa any toliara ny Tamarin
Tonga ny 19 oktobra teo, any Toliara, ny orkesitra Tamarin, avy any La Possession-La Réunion. Orkesitra mpitsoka mozika efa manana ny lazany. Hihaona sy hifampizara traikefa amin’ireo tanora ao anatin’ny tarika Malagasy Marching Band ireo mpikambana ao aminy.
Na ireo tanora ao anatin’ity orkestra mpitsoka mozika, sahanin’ny fikambanana Bel Avenir, any Toliara, ity aza, tsy vitsy ireo izao vao hifanerasera amin’ny mpilalao karazan-javamaneno tsofina, tahaka izao. Izany hoe, fotoana iray sarobidy ho azy ireo izao fiaraha-manatontosa « résidence de création » na fotoana famolavolana sanganasa vaovao izao.
Haharitra herinandro ny fivahinian’ny orkesitra Tamarin. « Nialoha izany, efa nifandefa « partition » misy ny hiran’izy ireo tsirairay ny tarika roa tonta ahafahana mamantatra sahady ny zava-bitan’ny andaniny sy ny ankilany. Aorian’ity « résidence » ity, hanolotra fampisehoana lehibe sy iraisana ny Tamarin sy ny Malagasy Marching Band », hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny fikambanana Bel Avenir.
Hotanterahina anio, ao amin’ny Vakok’Arts Trano, ao Toliara, io hetsika io. Hitohy ao amin’ny Hôtel Solidaire ao Mangily izany, ny alahady.